Maqaallada Ryan Crozier ee Martech Zone |
Maqaallada by Ryan Crozier
Ryan Crozier waa aasaasaha Wakaaladda Boon, Hay'ad suuq geyn xaga suuq geynta ah ayaa diirada saareysay sidii dadka looga caawin lahaa inay internetka ka sameeyaan wax wanaagsan. Wuxuu leeyahay 15 + sano oo khibrad suuq geyn ah wuxuuna ka caawiyay daraasiin ganacsi inay hirgeliyaan qaabka StoryBrand ee suuq geyntooda.
Khamiis, Juun 25, 2020 Khamiis, Juun 25, 2020 Ryan Crozier
Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, ganacsiyado badan ayaa u wareegay suuqgeynta internetka dartiis COVID-19 dartii. Tani waxay ka tagtay ururo badan iyo ganacsiyada yaryar oo ku mashquulsan inay la yimaadaan istaraatiijiyado suuq geyn ah oo dijitaal ah, gaar ahaan shirkadahaas oo inta badan ku tiirsanaa iibka iyagoo adeegsanaya dukaankooda leben-iyo-hoobada ah. In kasta oo makhaayadaha, dukaamada tafaariiqda, iyo kuwa kale oo fara badani ay bilaabayaan inay mar kale furmaan, casharkii laga bartay dhowrkii bilood ee la soo dhaafay way cadahay - suuqgeynta qadka waa inay ahaataa qeyb ka mid ah guud ahaanada